जातीय विभेदबारे महानायक राजेश हमाल भन्छन्, ‘दलितको मात्रै मुद्धा हो भनेर गैरदलितहरु हात बाँधेर बस्न मिल्दैन’ - Khula Patra
जातीय विभेदबारे महानायक राजेश हमाल भन्छन्, ‘दलितको मात्रै मुद्धा हो भनेर गैरदलितहरु हात बाँधेर बस्न मिल्दैन’
प्रकाशित समय: २१:०२:११
चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जातको प्रश्न’ को दोस्रो सिजन असोज २२ देखि प्रसारणमा आउँदैछ । जात सबैको साझा मुद्दा हुनुपर्छ र जातबारे सबै जातजातिले संवाद गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यको निर्माण गर्न समता फाउन्डेशनले उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रमको यो सिजनमा अभिनेताद्वय राजेश हमाल र दयाहाङ राई, मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारी, गायक प्रकाश सपूत र सञ्चारकर्मी निश्मा ढुंगाना चौधरी सञ्चालकका रुपमा रहनेछन् । फाउण्डेसनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चालकहरुले सुनाएको अनुभव हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।
राजेश हमाल, महानायक
हाम्रो समाजमा जातीय विभेद जुन भइरहेको छ, यसको भुक्तभोगी म आफैँ नभएपनि मेरो वरिपरि मैले त्यो देख्ने गर्थेँ । त्यसप्रति म सधैँ संवेदनशीलचाँहि थिएँ । एउटा मानवले अर्को मानवप्रति गर्ने व्यवहारमा किन यति फरक छ ? एउटा कोही व्यक्ति कुन जातको छ भन्ने आधारमा किन ऊमाथि गर्ने व्यवहारमा यति धेरै फरक छ ? भन्ने कुराले मलाई धेरै सताइरहन्थ्यो । मैले चलचित्रहरु गर्दा पनि यस्ता विभिन्न चरित्रहरुलाई नजिकबाट आत्मसाथ पनि गर्ने मौका पाएको थिएँ । मान्छेहरुलाई देख्दाखेरि लाग्छ कि ऊ त कलाकार हो, उसले त जस्तो पनि अभिनय गरिहाल्छ । तर, कलाकारले कुनै पनि चरित्र निभाउँदा खेरि उसले नजिकबाट आत्मसात् गरेको हुन्छ । र त्यो चरित्रसँग जोगिएर भोगाईहरु, नयाँ अनुभुतिहरु संगाल्ने मौका पाउँछ ।
मेरो अहिलेको अनुभवले चाँहि मलाई के लाग्छ भने यो जातीय व्यवस्था हाम्रो समाजमा अत्यन्तै गहिरो प्रभाव र हाम्रो मन मष्तिस्कमा चाँहि निकै नराम्रोसँग गडेको विषयवस्तु रहेछ । हामीले यसलाई लिपिबद्ध गरेर अथवा यसलाई संविधानमा जतिसुकै व्यवस्था गरेर जतिसुकै राम्रो संविधान बनाएपनि यसलाई व्यवहारमा उतार्न चाँहि निकै ठूलो चुनौती रहेको पाएको छु । मैले राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक वा अन्य जुनसुकै क्षेत्रका सरोकारवालासँग कुरा गर्दा खेरि उहाँहरु सबैले जातीय विभेदलाई महसुस गर्नुभएको छ । यो समाजमा भएको समस्या छ, भन्ने कुरा स्वीकार्नुहुन्छ । यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने पनि देखियो । तर, कता–कता त्यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि, त्यो इच्छाशक्ति, त्यो चाहना हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा उहाँहरु स्व्यम्ले चाँहि उतार्नका लागि भोगिरहेको पनि पाएँ । त्यसैले मलाई यो समाज झनै जटिल रुपमा गडेको छ । यो कानूनीरुपमा परिवर्तन गर्न खोजेपनि हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म नहुने रहेछ भन्ने लागेको छ ।
जातीय विभेद भनेको हाम्रो सोचमा आधारित हो । हाम्रो सोचबाट उत्पन्न भएको हो । यो मानवीय स्वभाव होइन, प्रकृतिले उत्पन्न गरेको विषय होइन । यो त हाम्रो सोचले उत्पन्न गराएको हो । त्यसैले सोचलाई बदल्नुपर्छ । यो सोचले कति पीडा दिएको छ भनेर गैरदलितले महसुस गर्नसकेका छैनन् । सक्दैनन् । त्यसैले दलितलेमात्रै यो मुद्धाको निराकरण गर्न सक्दैनन् । यसलाई दलितकै मात्रै मुद्धा हो भनेर गैरदलितहरु हात बाँधेर बसेको अवस्थामा चाँहि यो समस्याको समाधान सम्भव छैन ।